NUG Press Conference 1/2021 (June4/2021) – PVTV Myanmar
NUG Press Conference 1/2021 (June4/2021)
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ (၁/၂၀၂၁) အသံဖိုင် ပြန်လည်ထုတ်လွှင့်ခြင်း
Like – 5.3K Share – 836
NUG ရဲ့ ငွေတိုက်စာချုပ်ရောင်းချမှုကို ပြဿနာအချို့ ဖြေရှင်းပြီးသည်အထိ ဆက်လက်ရပ်ဆိုင်းထားမည်ဟု ထုတ်ပြန်
Sot Sot Phyu says:
We trust every movement of NUG & PDF
2021-06-05 at 2:31 AM
2021-06-05 at 4:49 AM
2021-06-05 at 6:12 AM
Nang Moe Moe Lwin says:
2021-06-05 at 7:24 AM
2021-06-05 at 7:34 AM
2021-06-05 at 9:21 AM
မူဝါဒနဲ႔လုပ္ငန္းစဥ္ေတြကိုလူထုကို မျပတ္တန္းခ်ျပ. လုပ္ျပ. ၿပီး ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ႐ွိတဲ့ ဒီမိုကေရစီ ဆန္တဲ့ ဦးေဆာင္အဖြဲ႔. အစည္းႀကီးလို႔ လုထုအားကိုးယုံၾကည္ေအာင္ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ေစခ်င္ပါသည္။
2021-06-05 at 9:58 AM
Rico Zuu says:
2021-06-06 at 12:19 AM
Dr Sa Sa ဘယ်ပျောက်နေတာလဲ
ပြည်သူတွေက ငတ်သေတော့မယ် တူးမီးသေနတ်နဲ့ခံချနေရတယ် ဘာမှ မထောက်ပံပဲ ဘယ်လိုန်ုင်မှာလဲ ဟ
PV Radio Program – June 4th 2021 : NUG-CIT : Free Download, Borrow, and Streaming : Internet Archive